आखिर जातीय विभेद किन ? « epurwa
प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:१८
साचिनै नेपाल जस्तो सानो देशमा १२५ जात र १२३ भाषा देख्न पाउनु पनि निकै खुशिको कुरा हो र हामी सबैले एक अर्काबाट सिक्न र त्यसका नकारात्मक पक्षहरु छ्न र त्यसलाई केलाउदै जाने हो भने हाम्रो देश नेपाल अझै सुगन्धित हुन्थ्यो होला।
नेपालमा जातीय विभेद तत्कालीन अवस्थाको एक ठूलो समस्याको रुपमा आएको देखिन्छ । केही मानिसहरुमा सबै जात उस्तै हो , नेपाल मेरो घर नेपालि मेरो थर हो भन्ने धारणा आएको छ भने केही मानिसहरु ठूलो सानो जात , सानो जातसग बिवाहा त के उनिहरुले छोएको पानी पनि खानु हुदौन भन्ने असामुहिक र साघुरो सोच भएका मानिसहरु पनि नेपालि समुहमा अटाएकै छन।
यस्ता नकारात्मक सोच बोकेमा मानिसहरुलाइ त्यसतो हुदैन यिनिहरुलाइ जात , धर्म , संस्कृती एक अर्का बाट पाठ सिक्न र मनोरञ्जन लिन अलग अलग बनाइएको हो भन्ने सिकाउनु पर्छ। त्यो सानो ठूलो जातको उन्मुलन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा नेपाली समाज अत्यन्तै अमानवीय र घिनलाग्दो हुन्छ भन्ने डर हुन्छ। अनि अर्को कुरा मैले के बुझि राखेको छैन भने सबै जात समान हुन्छ भन्ने तर जातीय कोटा छुट्टयाइदिने ? यो प्रवृत्ति मैले बुजिन । हामी सबै नेपाली हो, सबै मानव हो भन्ने धारणा बोकेको हामी अहिले प्रतिस्पर्धात्मक युग छ सबै मानिसहरु नेपालि हो र आफ्नो क्षमता , सीप , योग्यता अनुरुपको काम उस्ले पाउनुपर्दछ र सबैलाई समान ढंगले समान नजरबाट प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दछ यो होइनकी जातीय कोटा छुट्याउनुपर्दछ ।
अनि दलित भनेर हामी हेप्छौ ,सानो जात भन्छौ , यदि यो दलित सब्द नै हटाइयो भने को सानो हुन्छ । त्यसैले यी हटाउनु पर्छ। कि सकिदैन ? अवस्य पनि सकिन्छ किनकी यो सब्द मानिसले नै बनाएको हो र यस्को अर्थ गलत लागि रहेको हुनाले यसलाई अबस्य पनि मेटाउनु पर्दछ र सबैलाई एकैनाश ठुलै ठुला बनाइनु पर्दछ। वास्तवमा जुन कुरा पनि सबै जनता मिलि खुशी साथ सम्पुर्णलाइ स्बिकार हुन्छ भने मात्र त्यो कुरा राम्रो र उदाहरणीय हुन्छ। यदि कुनै मानिस वा अधिकांश मानिसहरुलाइ उक्त कुराले राता दिन पोल्छ , ज्यान पनि जान सक्छ भने त्यो संस्कृतिलाई किन निरन्तरता दिने? उक्त कुरालाइ पनि हटाइफाल्नु पर्दछ ।
एसियाका तारा सिद्धार्थ गौतम पनि हाम्रो देशका नागरिक थिए । उनले शन्ती आवश्यक छ भन्ने विषयको विशेष अध्ययन गरि प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन पनि गरेका थिए त्यसैले उनलाइ शान्तिका अगर्धुत पनि भनिछ। यिनलाइ संसारले भगवान भनेर चिन्द्छन। हामीलाई लाज लाग्नु पर्ने कुरा हो कि विश्व जगतको भगवान बुद्धले सिकाएर गएको पाठ बिर्सेर अशान्तिको बाटो धाउदैछम जुन सरासर गलत छ। यहाँ विभिन्न साना ठुला जात बनाएर व्यापार पनि गरेको पाइन्छ ।
म के भन्न चाहान्छु भने टुप्पी पालेर चन्दन लगाउने ठुला जात भनाउदाहरुलाई थाहा छैन होला त दलित पनि नेपाल आमाको सन्तान हो भनेर ? पकै पनि थाहा छ बुज पचाका मात्र हुन । एउटा भनाइ छ मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुदैन उक्त भनाइ प्रती म सहमत छु किनकी यदि मन , सोच सफा छैन भने टुप्पी पालेर चन्दन लगाएको कुनै औचित्य नै हुदैन र अब सबै जनता उस्तै हो साना ठुला जात हुदैन हामी सबै एकै हौ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दौ नया सोचका साथ अघि बड्दा मात्र बुद्धले सिकाएको बाटोमा लागिन्छ अनि मानव हुनुको औचित्य हुन्छ। मानव भएर मानबलाइ चिन्नुपर्दछ समान ब्यवहार गर्नुपछ र प्रतिस्पर्धा गर्दा क्षमता , सिपको आधरमा गर्नुपर्छ जातीयताको आधारमा होइन ।